ဆယ်ကျော်သက် porn စွဲ၏ကပ်ဘေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2014) Wrishi Raphael, MD - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ဆယ်ကျော်သက် porn စွဲ၏ကပ်ဘေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2014) Wrishi Raphael, MD
တနင်္လာနေ့, 27 အောက်တိုဘာလ 2014
စာရေးဆရာ / ရင်းမြစ်: ဒေါက်တာ Wrishi Raphael
ဒီရက်ကစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မရှိဘဲလူလတ်တန်းစားမိသားစုမှပိုင်ဆိုင်သည့်ဆယ်ကျော်သက်တွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပေ; ထို့ကြောင့်ခရီးဆောင်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ။ မိဘများ၏အများစုသည်သတင်းအချက်အလက်များအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အလားအလာအန္တရာယ်များ၏လုံးဝသတိမထားမိနေမြဲနေစဉ်; ဆယ်ကျော်သက်လူ့လိင်တစ်ဦးလုံးဝပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်များနှင့်မတရားစိတ်ကူးနှင့်အတူလူကြီးသို့တက်ကြီးထွားနှင့်သူတို့၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုဒါပေမယ့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှင့်အလောင်းမသာဒဏ်ရာရရှိတက်အဆုံးသတ်ဘို့ကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ပုန်ကန်တတ်သောနှင့်လှိုင်းကြီးနှစ်ပေါင်းတံခါးခုံပေါ်နေစဉ်ကလူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့လိင်အကြောင်းကို Impulses သတင်းပို့ရှိသည်နှင့်လက်ျာလမ်းညွှန်မှုမပေးလျှင်ထိုအ Impulses သတင်းပို့အားလုံးမှားရွေးချယ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မှသာပုံမှန်ပါပဲ။ လိင်ပညာရေးနေဆဲကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမညီကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမစမတ်ဖုန်းများ, တက်ဘလက်များနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်သတင်းအချက်အလက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဂရုမစိုက်ဟန်ရှိပါသည်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့အတှကျရှင်သန်ဆုံးရှုံးဖို့အဘို့, ကပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး အချိန်မတန်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အကျင့်ယိုယွင်းအတွက်အသက်နှင့်အလိုလိုကျလှနျးခွငျး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာအထက်တန်းကျောင်းသားသမီးများ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုစမတ်-ဖုန်းများမှတဆင့်, သုံးခွင့်ရှိသည်စိတ်ထဲကထူးခြားဆန်းကြယ်ပေမယ်ကမြင်ကွင်းတစ်ခုနောက်ကွယ်ကတရားခံနားလည်ရန်ညီတူညီမျှအရေးကြီးပါသည်။ သိရန်အဘယ်ကြောင့် Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး Coolidge Effect နားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်လူကြိုက်များသည်။
'' ပင်ကြိုတင်သို့သော်မရရှိနိုင်လိင်မိတ်ဖက်ထံမှလိင်ငြင်းဆန်ပြီးနောက်အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖို့မိတ်ဆက်လျှင်အားလုံးမျိုးစိတ်အထီးသက်တမ်းတိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုပြ။ ' ယောက်ျားများတွင်လိင်များအတွက်တတ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းများမှာတော့ဆန္ဒရှိအမျိုးသမီးလိင်မိတ်ဖက်ပိုမိုအရေအတွက်ကိုပိုမိုအားကောင်း။ အဆိုပါ Coolidge Effect ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများကအကောင်အထည်ခံခဲ့ရသည့်အခါကအမြတ်အစွန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုခံစားခဲ့ရသညျ။ ယနေ့ပျမ်းမျှဆယ်ကျော်သက်ထို့နောက်အပေါင်းတို့သည်သူ၏ဘိုးဘေးတို့အတူတူထားတစ်နာရီအတွင်းအင်တာနက်အပေါ်ပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုလက်လှမ်းရှိပါတယ်။ သူ့ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေသညျ့မြင့်မားခြင်းနှင့် damagingly ရှည်လျား Duration အဘို့အ dopamine ဟုခေါ်သောဓာတု neurotransmitter ထုတ်လုပ်ရန်ဒါကချိုးအသစ်အဆန်းလောင်စာ။
ဤသည်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုစေပါတယ်။ အဘယ်အရာကို dopamine ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သနည်း?
Dopamine လူသားများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍများစွာကစားသောဦးနှောက်များကဖြန့်ချိမယ့် neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုအမူ Dopamine ရှာကြံပျော်မွေ့ဆုလာဘ်အတွက် Dopamine ဦးနှောက်ထဲမှာပျော်မွေ့ mediates သောဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပျြောမှေ့စအခြေအနေများစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့နှင့်ပျြောမှေ့စလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အထဲကရှာတစျဦးကိုလှုံ့ဆျောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အစားအစာ, လိင်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးလည်းဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine လွှတ်ပေးရေးစိတ်ကြွဆေးများမှာ
Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း - ကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းတို့သည် dopamine ပြန်လည်စားသုံးခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ကိုကင်းသည် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်သည်။
Dopamine အဆင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသော dopamine ကူးစက်မှုသည် psychosis နှင့် schizophrenia တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံးသည် receptor level တွင် dopamine ကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း]
စွဲ related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုပြင်းထန်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်အိပ်စက်မှုလျော့ကျ, ယားယံခြင်း, အပြစ်ရှိတယ်, အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်း, အစာစားချင်စိတ်အရှုံး, အနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု။
ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးသည်အထိသူဒုက္ခကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်မထားဘူး။ အဘယ်ကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု? ထုံဦးနှောက်ထို့ကြောင့် erectile တုံ့ပြန်မှုဟန့်တားလိင်အင်္ဂါမှအားနည်းခြင်းနှင့်အားနည်းမက်ဆေ့ခ်ျများထုတ်လုပ်ရန်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်သလား? ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသာစိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်းပေမယ့်စတင်မပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အဖြစ်သူတို့ဟာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
အဆိုပါညစ်ညမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆုံးအားနည်းချက်အဘယ်သူနည်း ဆယ်ကျော်သက်အများဆုံးအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine အဆင့်ဆင့်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
ဥပမာအနေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး porn စွဲစစ်တိုက်ခြင်းငှါ 2-3 လအတွင်းလိုအပ်တယ်ဆိုလျှင်, ဆယ်ကျော်သက် 4-5 ကြိမ်အချိန်၏တူညီသောပမာဏကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်နှင့်ပြည့်စုံ abstinence နှင့်ခက်ခဲဘဝစတိုင်ပြုပြင်မွမ်းမံကိုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာလွင်ပြင်နဲ့ရိုးရိုးပါပဲ။ မိဘများကသူတို့သားတို့သည်မိမိတို့ဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်လုပ်နေတာနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးဆယ်ကျော်သက်တို့၏လက်သို့ချော်ထံမှမသင့်လျော်အင်တာနက်အကြောင်းအရာကာကွယ်တားဆီးဖို့နေကြတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုတက်ကြွသောဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့လာမယ့်အိမ်သာမှအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာနဲ့မဂ္ဂဇင်းထားခဲ့ပါနဲ့သူတို့ကရေချိုးခန်းကိုသွားသည့်အခါကကိုကြည့်ဖို့မကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမပြော။ မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုတစ်ဦးစပ်စုသည်သူငယ်၏လက်၌ "အိတ်ကပ် porn" ဖြစ်လာခြင်းကနေစောင့်ရှောက်ရန်, လုံခြုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမယ့်စမတ်ဖုန်းကိုလက်သင့်ပါတယ်။
K9 Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Browser ကို: အဆိုပါ K9 Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Browser ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ထွန်းသစ်စကနေအရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ဖို့ကောင်းစွာလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ app store ကိုအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်၎င်း၏ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူပြီးနောက်, လုံခြုံရေး settings ကိုအဘယ်သူမျှမကအခြား browser ကိုကို web browsing အတွက်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသောဒီတော့ချိန်ညှိခံရဖို့ရှိသည်။
Apps ကပ Installing Disable: ဤအမှုကိုပြုလျှင်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အလွယ်တကူမျှ filter ကိုရှိပါတယ်ထားတဲ့ app ကိုစတိုးကနေအခြားဘရောက်ဇာကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
You Tube ကို disable: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် You Tube ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ပျော်မွေ့ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတစ်ချိန်က You Tube ပေါ်တွင်သူတို့သာအနည်းငယ်ကလစ်ပျောက်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမှဖြစ်ကြသည်။
အားလုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်အစီအမံများကြားမှဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိုင်းယခုပြီးတော့မှားရွေးချယ်မှုစေမည်နိုင်ပြီးမိဘများကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထဲတွင်သူငယ်ကသူတို့ရဲ့အသားနှင့်အသွေးဖြစ်၏ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှားတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူတို့ကိုခှငျ့လှတျဖို့ wrenching နှလုံးပါလိမ့်မည် ။
သို့သော် unsupervised စမတ်ဖုန်းများသုံးစွဲဖို့ဆယ်ကျော်သက်အထူးသယောက်ျားလေးများခွင့်ပြုပါရန်, သူတို့အပျေါမှာလှည့်လုံခြုံရေး switch ကိုမပါဘဲတစ်ဦးစူပါမားကတ်များတွင်သေစေလောက်သေနတ်ရွယ်မှခွင့်ပြုမှပမာဏမှာတူညီနိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအခြားမည်သည့်တူသောလမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးသူတို့အထောက်အထားတွေကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ပြီးတော့ကုနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးအဖျက်နည်းလမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိခိုက်စေပါဘူးဒါကြောင့်မိဘများကသူတို့သားသမီးများ၏အကာအကွယ်ဖြစ်ရပါမည်။